GOOD NEWS TAKTAK. CDF BAK NIH THANHNAK AN TUAH CANG – The Chinlung Post
August 18, 2021 admin Local News 0
Thawngpang ttha tuk CDF nih an langhter cang. Nili chung CDF le ralhrang kawlralkap i kahnak ah Pathian nih CDF lei him teinachiah hna. CDF lei nih thanhnak an tuahmi ah nili chung kahdohnak ah kanmah CDF lei inanunnakaliammi kan um lo tiah an langhter. Asinain hliam fak loin minung tlawmpal an tuar tiah an langhter chih. Hi konghe pehtlaiin fiang teinalanghtermi atanglei banginasi.
CDF-Mindat ၏ တိုက်ပွဲသတင်း August 18, 2021. စကစတပ်တွေ လူသူလက်နက် အင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ စစ်မျက်နှာတွေခွဲပြီး ထိုးစစ်ဆင်လာတယ်။ လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်.. လူအင်အား.. နည်းပညာ စတဲ့နေရာတွေအားလုံးမှာ စကစတပ် ကို ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF-Mindat က ဘယ်လိုမှ မယှဥ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ CDF-Mindat ဟာ သူ့အစဥ်အလာအတိုင်း မဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထား၊ အကျပ်အတည်း အခက်အခဲပေါင်းစုံကနေ ရုန်းထွက်လာနိုင်ခဲ့တယ်။
ဒီ ၄ ရက်တာတိုက်ပွဲမှာ.CDF-Mindat က ကျဆုံး မရှိ။ ဒဏ်ရာရသူ အနည်းငယ်သာရှိပြီး ရန်သူ့လက်နက်တွေ ရလိုက်တယ်။ ၁၆ မိုင်စခန်းကို ပြန်သိမ်းလိုက်နိုင်တယ်။ စကစတွေဘက်က အနည်းဆုံး ၂၀ ကျော် ကျဆုံးပြီး ဒဏ်ရာရသူ အများအပြားနဲ့ နောက်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်။ ကျေးဇူးတင်ဝမ်းသာဂုဏ်ယူတယ်ဆိုတာထက် ပိုပါတယ် CDF-Mindat ရဲဘော်များ။ Credit: Chinland Defense Force
Thawngpang relchih: Falam Peng Kahdohnak ah SAC Ralhrang 40 Hrawng an Thi. July 1 in August 15 karlak ah Falam peng chung ah CNDF, PDF-Kalay le CDF i bawm in SAC ralhrang he kahdohnak voi tam nawnachuak i SAC ralhrang lei in 40 hrawng an thi lai, tiah CNDF nih an ruahdamh. July 1 ah CNDF le PDF-Kalay i bawm in SAC ralhrang he kahdohnak ah ralhrang4an thi.
July 21 in August 15 tiang ah Falam-Hakha karlak ah CNDF le CDF i bawm in SAC ralhrang he kahdohnak voi tam nawnachuak i ralhrang lei in minung 35 hrawng an thi lai, tiah an zumh. SAC ralhrang 30 hrawng hliamhma an pu i, Falam-Hakha karlak ah SAC ralhrang Drone pakhat zong kahthlakpiak an si, tiah CNO nih cathanh an chuah. The Chin Journal